Soul saaxiibkiisa iyo waa
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Soul saaxiibkiisa iyo waa
Waxaan qabaa waxaa la dareemay in "qof si xunna iman Ahaanshaha," "aan waxtar lahayn oo tani ma aha qofka"?
sida, dadka jiritaanka Yorisoeru sababta nalastiko, waxaa laga yaabaa inaad naf saaxiibkiisa. saaxiibkiisa Naf A, waa maxay jira noocyo kala duwan oo xiriir ah sida ku caashaqay iyo saaxiibada.
Waxaan ku dhashay si ay u dhintaan, waxaan sidoo kale soo noqnoqda marar badan wareeg in sidoo kale u dhalatey. In wareegga in, sidoo kale loo yaqaan qofka qoto dheer la leh a kulan ku laayeen naftiinna saaxiibkiisa marar badan la macaamilaan. In wareegga, taas oo loo malaynayo in ay si dabiici ah ka hor tago waqtiga waa in la kulmo, waxaan mar kasta oo u dhisay xiriir dhow. saaxiibkiisa nafta, taas oo ku xiran yihiin nafta ka baxsan shakhsiyadda
sida, waa in aad had iyo jeer dareemayaa wax ka duwan dadka kale. In
waa feature a of
naf saaxiibkiisa ah, waxa in uu noqon doono? Feature A of saaxiibkiisa nafta.
? marar badan in
ee la soo dhaafay nolosha in aan dago iyo wada isagoo fursadda shirka, maxaa yeelay, waa dadka qaatay waqti isku mid ah, xataa marka aad shukaansi hadda la kulmay, waxaad ku Bixisaan karo sabab qaar ka mid ah is dajiyaan. Maxaa yeelay, waxaa ku xiran by kalsooni wayn in kasta oo kale, ayaan soo xusuusan dareenka maskaxda waa nasasho leh.
? Xitaa ka hor sida ay ahayd
naf saaxiibkiisa iyo kulanka ugu horeeya in Waxaan dareemayaa in ay jiraan waa in ay meel, waa inaad xusuusataan dareenka nostalgic sidii aan meel la kulmay. Oo, waxa ay u muuqataa doonayaa in aan noqdo si dabiici ah xeel dheer. Tani waa, waxa sheegay in caddeyn kasta oo kale oo heer nafta waa kasta oo kale oo soo jiidatay.
? in ay faa'iido iyo khasaaro tegayaa shukaansi dadka Tsukiaeru
iyo furitaanka, waa sida ay tahay la yaab yar in la falgala aan la tixgelinayo khasaaro iyo faa'iido. Laakiin ay isku naf, xitaa iyada oo ay ka mid yihiin xisaabinta kasta, sida faa'iido iyo khasaaro, waxaa ku dhashay dareen ah in aad rabto in aad wax ka qaban waayo, dhinaca kale.
? lamaanahaaga la bartey arkay
sida caadiga ah waa, oo waa isaga leeyihiin erayada in aad ka fekereyso inaad dhinaca kale Waxaa inta badan ma scolded in, waxa ay qaadataa qadar badan oo waqti si ay u noqdaan sidii loo arki karaa in wejiga iyo dabeecad. Si kastaba ha ahaatee, xitaa iyada oo aan erayada iyo macluumaadka kale ee ay isku naf, aad Siidi kartaa bartey dareenkooda.
maxaa yeelay, qaybo ka mid caadi ah inta badan waa
this qaybo ka mid caadi ah ma aha qayb ka mid ah oo kaliya ee shakhsiyadda iyo dabeecadda sida. Tusaale ahaan, waddankiisa iyo meelaha ugu jecel yahay, ilaa wax qoyska iyo qaab-dhismeedka in ay leeyihiin, waa mid ka mid ah muuqaalada saaxiibkiisa nafta in ay jiraan meelo badan oo caadi ah.
waa in ay la kulmaan saaxiibkiisa nafta?
waa waxa kasta oo kale oo soo jiita dabeecadda iyo saaxiibkiisa nafta, laakiin waxaa jira waxaa lagama maarmaan ah in ay la kulmaan waa. Sababta oo ah marka aad la kulanto saaxiibkiisa nafta, waxaad tidhaahdaan, Waxaad inta badan waa guul aad u weyn oo dhan iyo dhibic jeestay nolosheyda. Markii la isku dayayaan in ay Susumo in tallaabada xigta, sida habka koritaanka, waa wax wanaagsan in la kulmaan marka ay isku dayayaan in ay nolosha Fumo.
Sidaa darteed, si ay u daboolaan saaxiibkiisa nafta, marka hore naftiisa horumarka si fiican, iyo in uu la kulmo dadka Aynu isku day in mar kasta oo ay xumme tahay.
, Waa wax wanaagsan in la kulmaan marka ay isku dayayaan in ay nolosha Fumo.